EU oo ka shiraya habka loo gacan qaban karo dalalka taageerada u baahan oo ay Soomaaliya ku jirto – Radio Daljir
Nofeembar 25, 2013 1:51 b 0
Brussels, November 25, 2013 – Magaalada Brussels ee dalka Beljium, waxaa ka furmaya shirka horumarinta dalalka midowga Yurub oo looga hadlayo habka loo gacan qabo karo dalalka taageerada u baahan ee ay Soomaaliya ku jirto.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Soomaaliya Marwo Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa u ka amba-baxday magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, waxaana safarkeeda ku heheliya la taliyaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Yariisow iyo diblumaasiyiin Soomaali ah.
Marwo Fowsiyo Yuusuf oo warbaahinta dowladda kula hadlay garoonka Muqdisho waxaa ay sheegtay in shirku muhiimad wayn u leeyahay dadka iyo dowladda Soomaaliyeed, dalalka midowga Yurub ayaa il gaar ah ku haya taageerada Soomaaliya, sida wasiirku sheegtay.
Shirka ayaa Brussels ka socon doono muddo labba maalmood ah.
Wasiirka arrimaha dibedda iyo iskaahiga caalamiga ah ee Soomaaliya, waxay sheegtay inay filayaan in natiijo wax ku ool ah ay ka soo baxdo shirka ka furmaya Beljium ee horumarinta midowga Yurub, balse lagu casumay dalal ay ku jirto Soomaaliya.